(tonga teto avy amin'ny Apokalipsy)
Apokalipsin'i Joany, na Apokalypsin'i Jaona na Apokalipsy, Fanambaràn'i Jesoa Kristy na Fanambaràna no iantsoana ny boky kanonika farany ao amin'ny Baiboly kristiana, ao amin'ny Testamenta Vaovao, izay misy faminaniana momba ny andro farany sy ny fitsarana farany. Mety ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 96 no nanoratana azy.
Ny teny hoe Apokalipsy dia avy amin'ny teny grika hoe Ἀποκάλυψις / Apokalupsis izay midika hoe "fanambaràna" "ala sarona" na "fanalana voaly" araka ny andalana voalohany ao amin'ilay boky hoe Ἀποκάλυψις Ἰησού Χριστού / Apokálupsis Iēsou Khristoũ izay midika hoe: "Fanambaràn'i Jesoa Kristy". Ny hoe Ἀποκάλυψις Ἰωάννου / Apokálupsis Ioánnou no nadika hoe Apokalpsin'i Joany (na Apokalipsin'i Jaona).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokalipsin%27i_Joany&oldid=977562"
Voaova farany tamin'ny 22 Novambra 2019 amin'ny 15:30 ity pejy ity.